समयमा उपचार गरे निको हुन्छ क्यान्सर, कतिपय परीक्षण आफैं पनि गर्न सकिन्छ (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > समयमा उपचार गरे निको हुन्छ क्यान्सर, कतिपय परीक्षण आफैं पनि गर्न सकिन्छ (भिडियो हेर्नुस्)
admin September 27, 2020 भिडियो, स्वास्थ्य	0
काठमाडौँ, ११ असोज – नेपालमा क्यान्सरको उपचारका लागि स्वदेशमै जनशक्ति उत्पादन र सेवामा विशिष्टीकरण आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा बिरामीहरु उपचारका लागि विदेश जाने गर्दछन् । विदेशिने रकम रोक्न र सस्तोमा सहज उपचारका लागि सेवा विशिष्टीकरण आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा निर्मल लामिछाने क्यान्सरका सबैजसो साधारण उपचार यहाँ गरिने भए पनि विशिष्टीकरण गर्न नसकिएको बताउँछन् । उनका अनुसार उच्च तहको प्रिसिसन रेडियो थेरापी गर्न सकिएको छैन । रोबटिक सर्जरी र बोनम्यारो प्रत्यारोपणजस्ता सेवा नेपालमा सहज उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
युरोलोजिष्ट (मूत्ररोग विशेषज्ञ) समेत रहेका उनी जनशक्ति उत्पादन सहज हुन नसक्दा समस्या भएको धारणा राख्छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (नाम्स) बाहेक अन्यत्र क्यान्सरका विज्ञ जनशक्ति उत्पादन भएको जनाउँदै उनले यस अस्पताललाई प्राज्ञिक थलो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
यहाँ रहेका २२ जनाभन्दा बढी विज्ञ चिकित्सकलाई तालिम दिएर प्राध्यापकका रुपमा काम लिन सकिने जनाइएको छ । समयमै क्यान्सरका जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नर्सिङदेखि डिएमसम्मका क्यान्सरका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेमा उपचारमा सहज हुने छ ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतम यस अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरेर दक्ष र विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन्। उनले भने, “प्रशस्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सके गाउँगाउँमा क्यान्सर पहिचान गर्न सहज हुन्छ ।”
अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा विजयचन्द्र न्यौपाने अस्पतालमा नर्सिङको पढाइ शुरु भएको जनाउँदै थप शैक्षिक कार्यक्रम ल्याएर नेपालकै नमूना प्रतिष्ठान बनाउन सकिने बताए । यहाँ रहेको पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारसँगै जनशक्तिले प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न समस्या नरहेको जनाइएको छ । नेपालका ५० प्रतिशत क्यान्सरका रोगीहरु उपचारका लागि विदेश जाने गरेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक डा गौतम कतिपय क्यान्सरका रोगहरु आफैं परीक्षण गर्न सकिने बताउँछन् । उनले भने, “आफैँले छामेर वा लक्षणहरु हेरेर क्यान्सर हो/होइन पत्ता लगाउन सकिन्छ ।” शरीरमा गिर्खा, गाँठागुठी देखिनु, कोठी, मुसाको रङ बदलिनु वा आकार बढ्दै जानु, लामो समयसम्म खोकी निको नहुनु, खाना निल्न गाह्रो हुनु, स्वर परिवर्तन वा धोद्रो हुनु क्यान्सरका लक्षण हुन् । यस्तै खकारमा रगत देखापर्नु वा लामो समयसम्म खोकी निको नहुनु, लामो समयसम्म दिसामा गोटा पर्नु, पातलो दिसा हुनु, दिसामा रगत देखिनु पनि क्यान्सरको लक्षण हुन् ।
महिनावारी नभएको बेलामा रगत देखिनु, महिनावारी रोकिएका महिलाको पुनः रक्तश्राव हुनु वा महिनावारीको समयपछि रक्तश्राव हुनु, स्तनमा गाँठागुठी देखिनु, मुन्टोबाट रगत मिसिएको दूध आउनु वा मुन्टो दबिनु क्यान्सरका लक्षणहरु भएको जनाइएको छ । यसैगरी छोटो समयमै शरीरको वजन घट्नु, रक्तअल्पता देखिनु, ज्वरो आइरहनु, नाक, मुख, शरीरका अन्य छिद्रहरुबाट रगत आउनु पनि क्यान्सरका लक्षण भएको निर्देश डा. गौतमले जानकारी दिए । यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त अस्पताल आउन पनि उनले सुझाव दिए ।
अस्पतालका अध्यक्ष डा. लामिछाने मानिसले व्यक्तिगत सरसफाइ र खानपानमा विशेष ध्यान दिन सकेमा क्यान्सर रोगबाट बच्न सकिने बताए। उनका अनुसार चुरोट, बिडी, खैनी, सूर्ती, जाँड, रक्सी र लागुपदार्थ सेवन नगर्ने, बासी, सडेगलेको र ढुसी परेको खानाहरु नखाने, पोलेर डढेको मासु र अन्य खानेकुरा नखाने गर्दा पनि क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ ।
यसैगरी अखाद्य रङ प्रयोग गरिएका खानेकुराहरु नखान, चिल्लो बोसोयुक्त खानेकुरा र धेरै नुन नखान, आफ्नो गुप्ताङ्ग सधैँ सफा राख्न, मौसमअनुसारको हरियो सागपात, तरकारी र फलफूल दिनहुँ खान उनले सुझाव दिए । महिलाले आफ्नो गर्भाशय श्राव परीक्षण प्रत्येक वर्ष गर्ने हो भने पनि क्यान्सरबाट बच्न सकिने उनको सुझाव छ ।
यस्तै महिलाहरुले स्तनमा गिर्खा, गाँठागुठी पलाएको छ÷छैन प्रत्येक महिना आफैले राम्ररी छामेर हेर्ने र फेला परेमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिने गर्न सके स्तन क्यान्सरबाट बच्न सकिने डा. लामिछाने बताउँछन्। अस्पतालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. आचार्य रोगका विषयमा जनचेतना जगाउन नसकिएको स्वीकारछन्। उनले भने, “सबैभन्दा पहिले क्यान्सरबारे सचेतना फैलाउनुप¥यो । जसले रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।” मानिसले समयमै थाहा पाएमा उपचारबाट निको हुन सक्ने भएकाले आम नागरिकसम्म यस रोगका बारेमा जनचेतना जगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । छिटो उपचार गर्न सकेमा निको हुने र खर्च कम लाग्ने उनको भनाइ छ ।
अस्पतालका उपनिर्देशक डा. कृष्णसागर शर्मा क्यान्सर समयमा नै पत्ता लगाएर उपचार गर्ने हो भने क्यान्सर पूर्णरूपमा निको हुने बताउँछन्। पहिलो र दोस्रो चरणमा क्यान्सर पत्ता लाग्यो भने निको हुने सम्भावना पनि धेरै हुने उनको भनाइ छ ।
करिब एकतिहाइ क्यान्सर स्वच्छ खानपिन र आहार बिहारबाट रोक्न सकिने बताउँदै उनले भने, “एकतिहाइ क्यान्सरको शुरुकै अवस्थामा उपचार गरेर निको पार्न सकिन्छ । बाँकी एकतिहाइ क्यान्सर रोग निको नहुने खालका हुन्छन् । त्यसलाई पनि विभिन्न खालका उपचारबाट बाँच्ने बेलासम्मका लागि जीवनोपयोगी बनाउन र मानवीय जीवन जिउन सक्ने बनाउन सकिन्छ ।” पछिल्लो अध्ययनअनुसार मानिसमा हुने क्यान्सर एक सयभन्दा बढी प्रकारका छन् । तर त्यसमध्ये केही क्यान्सर भने अत्यधिक मात्रामा मानिसमा हुने गरेको पाइन्छ । यो रोग मानव शरीरको कुनै पनि अङ्गमा हुन सक्दछ ।
भरतपुरमा रहेको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल आज २० वर्ष पूरा गरी २१ वर्ष प्रवेश गरेको छ । चीनको सहयोगमा स्थापित यो अस्पतालमा हाल ४५० श्यया रहेका छन् । अस्पतालले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी अस्पतालको वार्षिकोत्सव तथा सतर्कता दिवस मनाउँदैछ ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण जुम प्रविधि मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिँदैछ । यस अस्पतालको स्थापना दिवसलाई नै सरकारले क्यान्सर सतर्कता दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षमा चार हजार ८९४ नयाँ क्यान्सरका रोगीको उपचार गरिएको छ । अस्पतालको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा एक लाख ४५ हजार ७७६ जनाको बहिरङ्ग सेवामा उपचार गरिएको छ । जसमध्ये ३२ हजार ८३१ नयाँ हुन् । अस्पतालले तीन हजार ९३९ जनाको शल्यक्रिया गरेको जनाएको छ ।
अस्पतालले एक वर्षमा रक्तक्यान्सरका बिरामीलाई म्याक्स फाउण्डेशनबाट प्राप्त रु २० करोड १९ लाखको औषधि निःशुल्क वितरण गरेको छ । यसैगरी विपन्नलाई १६ करोड र क्यान्सर सेवामार्फत रु ५२ लाखको औषधि वितरण गरिएको छ । ७० वर्षमाथिकालाई निःशुल्क सेवावापत रु १६ लाख ९६ हजार ३३५ र १५ वर्ष मुनिकालाई रु एक करोड ६७ लाख ४१ हजार ४९७ बराबरको उपचार निःशुल्क गरिएको छ ।
रत्याैलीकाे नाममा अामाहरूले यसरी मस्ती गरेपछि… भिडियो मै हेर्नुहाेस
८ बर्षिय बालक प्रयास कुँवर हिजो साँझदेखि बेपत्ता, अपहरण भएको आशंका (भिडियोसहित)